Ciidamadda NISA oo soo bandhigtay ragg hubaysan – Radio Daljir
Ciidamadda NISA oo soo bandhigtay ragg hubaysan
Juunyo 24, 2019 12:13 g 0
Ciidamada Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxaa ay ka fuliyeen Xaafado ka tirsan degmada Baardheere ee Gobolka Gedo,howlgalkaas oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay soo bandhigeen rag hubeysan oo laga soo qabtay Xaafadaha degmada Baardheere,kuwaas oo saraakiishu sheegeen inay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab.
Raggaan oo gaaraya ilaa laba ayaa lagu soo bandhigay Taliska Hay’adda Nabadsugida ee degmada Baardheere, iyaga oo wata Bambooyin iyo Bustoolado,isla markaana lagu soo qabtay intii uu howlgalka socday.
Saraakiisha Ciidamada Nabadsugida ee degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa daljir waxaa ay u sheegeen in raggaan ahaayeen kuwa Shabaab u qaabilsan dilalka qorsheysan iyo bamba tuurista,isla markaana ay ku raadjoogeen.
Madaxtooyadda Soomaaliya oo ka tacsiyeeysay Geeridda Allaha u naxariistee Garyaqaan Yuusuf Xaaji Nuur.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo sheegtay in Doorashada Galmudug ay ka dhacayso Dhuusamareeb